Ongorora Saiti Yekumhanyisa neTorbit Insight
Chitatu, June 6, 2012 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
Iyo saiti irikutora zvishoma. Ini handigone kukuudza kangani kandakagamuchira iyi meseji pamusoro pemakore ndichishanda nevatengi. Siti yekumhanyisa yakakosha zvakanyanya ... inogona kudzikisira mabhureki, kuchengetedza vashanyi kuita, kuwana yako saiti kuverengerwa zvirinani muGoogle, uye pakupedzisira inotungamira kune dzimwe shanduko. Tinoda nzvimbo dzinokurumidza… ndeimwe yenyaya dzekutanga dzatinorwisa nemutengi (uye zvakare nei tichigamuchira WordPress pane Flywheel - icho chinobatana chinongedzo).
Kuwana katsamba kuti iyo saiti inononoka zvinoshungurudza nekuti zvinogona kunge zvichibva pamazana ezvekuita… yakawanda sei bandwidth iyo kambani yako, vanhu vangani vari kuishandisa, kumashure kurodha pasi kwauri kuita, bhurawuza rauri kumhanya, bhurawuza mawedzero ari kushanda, kunyangwe iri saiti yakachengetedzeka, kunoitirwa matunhu ako, kunoitirwa saiti, mangani mamwe masosi anotakurwa pane imwecheteyo inomiririra, sevha yako inobata sei saiti uye kana iwe wakagovana zviwanikwa kuburikidza CDN kungodudza zvishomanana.
Hazvigoneke kutaurira kuti dambudziko ringave ripi kana vatengi vedu vakasvika kwatiri ndokubvunza. Saka, isu tinowanzo shanyira nzvimbo senge Pingdom uye mhanyisa zvishandiso zvekumhanyisa uye ratidza kwavari kuti munhu wese ari kunze kwavo haana matambudziko. Ehezve, ndipo pavanodzoka votiudza kuti munhu wese wavanoziva vane matambudziko, zvakare… vanogomera.
Uye kuongorora peji rako nekumhanya kuburikidza neGoogle Tsvaga Console (Labs chikamu) idambe ... zvinoenderana nevanhu vanomhanyisa mudziyo wekushandisa kuti vataure kumhanya. Iko hakuna chaizvo nzvimbo dzakawandisa iwe dzaunogona kuenda kuti uwane mhinduro yechokwadi. Kana aripo? Torbit Kunzwisisa chishandiso chaicho chekuyera mushandisi icho chinowedzera kujekesa kune webhusaiti yako zvinogona kwete kungopa mhinduro, asiwo mhinduro. Iyo inokutendera iwe kucheka uye dhiza vese vashanyi vako uye yako saiti kuti uone iwo chaiwo mufananidzo wekumhanya kwako saiti.
Torbit Kunzwisisa inogadzira chaiyo chaiyo yekuyera metric metric, ichibvumira mushambadzi kuti atarise iyo chaiyo peji rewebhu kurodha nguva kune mumwe nemumwe mushanyi Icho chishandiso chinodonhedza pasi ruzivo kuti pini-poindi apo chairo peji rewebhu rinononoka, uye nei. Iyo-yechipiri resolution inoita kuti data riwanikwe chaiyo nguva.
Icho chishandiso chinopa intuitive matrices senge kuwirirana pakati pewebsite kurodha kumhanya uye bounce mitengo kana shanduko mitengo, chaiyo nguva data kurondedzera mumararamiro mepu maonero, histogram yevashandisi kutakura nguva nemetriki senge median uye epamusoro percentiles, kuenzanisa kwekuita kune akasiyana akasiyana mabhurawuza uye geographies, uye mazano akasarudzika ekuti ungaite sei zvirinani, zvese zvine zana muzana sampling. Uye kana iwe uchimhanyisa iyo saiti yeWordPress, unogona kusimuka nekumhanya nekukurumidza ne yavo WordPress Plugin.
Neruzivo urwu, unogona ikozvino kuziva kana iko ikozvino kodhi kutumirwa kwakaita kuti webhusaiti yako inononoka, kunyangwe iyo honzeri yacho iri yakaremerwa sevha, kana ... ingo ratidza kumutengi wako kuti urikuita basa rako uye saiti iri kushanda chaizvo.
Izvo zvakare zvinonakidza kucherechedza nguva dzekutakura munzvimbo, zvakare!
Mutengo wacho wakarurama zvakare. Iyo yekutanga vhezheni ye Torbit Kunzwisisa, kusanganisira zana muzana sampling kusvika anosvika chiuru chemazana emawadhi peji maonero uye 100 mazuva ekuchengetedza dhata, anouya akasununguka chose. Kana iwe uchida kudonhedza pasi muzvinyorwa, tarisa kushanya kwako kwakanyanya uye kwakaipisisa, kana kunyange kutarisa shanduko nenguva yekuremerwa, chishandiso chinoda kukwidziridzwa.
Tags: kubhururukagoogle webmastersmapepaspeed monitorkukurumidza kuongororakukurumidza kunetsatorbittorbit njerewpengine
Unofanira Kuvaka Mobile App kana Nhare mbozha?
Kutenda neruzivo urwu Doug, iri zvirokwazvo ibasa rinotonhorera kwazvo uchifunga mutengo wemutengo.
Iwe unotengesa @ twitter-353825851: disqus! Ndakafunga kudaro, futi !!!
Jun 7, 2012 pa9: 34AM
Iwe haugone kurerutsa kukosha kwemutoro nguva yewebhusaiti yako. Kunyangwe kana zvirimo uye dhizaini zvakanaka, kana zvikatakura zvishoma nezvishoma ucharasikirwa nevashanyi. Idzo injini dzekutsvaga dzinofarira mawebhusaiti anopa mushandisi akanaka chiitiko.
Jun 9, 2012 pa2: 34AM
Doug, Zvakanaka kunzwa kuti urikushandisa Torbit Insight uye uchizviwana zvichibatsira. Ndatenda nechinyorwa!